Akụkọ banyere Geo-Engineering - Afọ Infrastructure - YII2019 - Geofumadas
Ọktoba, 2019 Engineering, innovations, Microstation-Bentley
N’izu a, a na-eme emume a na Singapore Afọ Na Nnọchi Anya Ihe Nnọrọ - YII 2019, onye isi okwu ya na-elekwasị anya na ịkwaga dijitalụ na-elekwasị anya na ejima dijitalụ. Ihe omume a bu ihe ndi Bentley Systems na Microsoft, Topcon, Atos na Siemens kwalitere; na na njikọta na-atọ ụtọ kama ịkekọrịta omume, ha ahọrọ ịwepụta azịza bara uru bara uru na usoro nke usoro mgbanwe nke ụlọ ọrụ nke anọ metụtara geo-engineering, ọkachasị na mpaghara injinia, iwu, mmepụta ụlọ ọrụ. na njikwa nke obodo dijitalụ.
Obodo, usoro na nwa amaala.
Onwe m, mgbe afọ 11 nke itinye oge na-esonye dị ka ndị nta akụkọ ma ọ bụ ndị juri na ihe omume a, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ abụwo ihe m kacha jiri kpọrọ ihe. Ọ bụghị n'ihi na ihe ọhụrụ a na-amụta kpọmkwem, mana n'ihi na mgbanwe a na-enye anyị ohere ịhụ ebe ihe na-aga. Ọ dịghị ihe na-adịghị eme na ndị ọzọ ọrụ, ma nwere ihu ọma afọ a akara nghazi ka Filiks na nwa amaala dị ka etiti nke uche; Ọ gaghị abụ ihe ijuanya na ngwaọrụ IT niile nke ụlọ ọrụ a dị mfe na isiokwu ndị a, na ịme ihe ngosi na mmekọrịta mmekọrịta.
Nzukọ isii nke ihe omume a bụ:
Obodo Dijitalụ: N'afọ a, nke a bụ ọkacha mmasị m, nke na-agba mbọ inyeghachi nkwụghachi azụ na asọmpi ahụ site n'ikwu na akụ dị n'obodo ahụ gafere GIS + BIM. Nkwupụta uru bara uru na-eweta sistemụ ejikọtara yana mmiri agwakọta kama ị nweta ọtụtụ ngwọta, kwekọrọ na nchịkọta pọtụfoliyo anyị hụrụ na afọ gara aga na nnweta ọhụrụ na kama iche echiche banyere ntinye nke usoro njikwa njikwa injinia na geospatial, ha na-achọ ka mfe ịme ngosi uwe nke obodo si a holistic n'ọnọdụ, na-eche banyere integral usoro nke ihe ndị mmadụ na-arụ na-achịkwa a obodo: atụmatụ, injinịa, ewu na-arụ ọrụ.
Igwe eletrik: Nzukọ a lekwasịrị anya na ihe ịma aka nke omume oriri na nkwadebe nke ọnọdụ iji kwado uto nke ọchịchọ. Uru nzọ bụ na otu esi eme mkpebi ka mma site na njikwa zuru oke nke netwọkụ nkesa, nye site na njikwa akpaaka.
Ilzọ ụgbọ oloko na ụzọ: A ga - atụle usoro ndị eji eme ihe na akpaghị aka, ozi gbasara maka ime mkpebi, njikwa ntinye na mbelata ọnụ n'okpuru njikwa usoro ndụ nke akụ dị ugbu a na mmụba na-adabere na mmepe obodo.
Ogige ndị ọrụ na ụlọ: Nzukọ a na-achọ ịtụle ma bụrụ ihe ịma aka maka ịme anwansị oge na ngagharị nke ndị mmadụ. Na mgbakwunye, otu njikwa dijitalụ nwere ike isi mee mgbanwe nke ihe ngagharị nke obodo mepere emepe.
Adszọ na Nkwa: Nke a ga - egosi etu i nwere ike isi chekwaa usoro owuwu ihe yana usoro iji wuo ihe owuwu dijitalụ na ime simulation.
Ihe eji egbochi ulo oru Nke a bu nzuko omumu oma zuru oke na uzo PlantSight maka oru ngo di iche iche achoro na gas, mmanu na usoro nke igwu egwu.
Ntozu nke njikọta
Ọ bụ ezigbo nkuzi banyere otu ụlọ ọrụ na-achịkwa ezinụlọ, kama ịga n'ihu ọha, wepụtara iji bulie akụ ya iji were amamihe ya gosipụta mgbanwe ụlọ ọrụ na-esote, n'aka na ụlọ ọrụ ndị isi na injinịa (Topcon), ọrụ (Siemens) na njikọta (Microsoft). N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya anyị hụrụ ihe ProjectWise ga-enwe na ntanetị nke netwọkụ Azure, yana PlantSight na ahịa ahịa mmepụta ihe niile.
N'afọ a, ihe ijuanya ahụ abụchaghị obere, ya na njikọta ọnụ Bentley Systems - Topcon, lekwasịrị anya n'ịmepụta ụzọ ọhụụ ọhụụ dabere na teknụzụ na usoro dị mfe. Ihe ngwọta a esiteghị na uwe elu ahụ, mana ọ bụ nsonaazụ nke ihe karịrị otu afọ nke nyocha na mmekorita nke ihe karịrị ndị sonyere 80 n'etiti ụlọ ọrụ gọọmentị, ụlọ ọrụ nkeonwe na ndị ọkachamara ejirila ihe ngwọta IT, akụrụngwa, usoro na ezigbo omume na usoro ndụ nke nnukwu ọrụ akụrụngwa. Emechara nke a Ulo akwukwo, ihe si na ya pụta bụ Ọrụ Owuwu Digital na DCW
Ọrụ Owuwu Dijitalụ, Ọ mepere ụdị azụmahịa dị iche iche na mgbanwe nke mgbanwe ụlọ ọrụ nke anọ, mana akọwapụtara nke ọma na ngalaba ihe owuwu, ụlọ ọrụ nwere ike imeziwanye usoro ọrụ ihe owuwu ha - site na iji usoro ọrụ dijitalụ - na njikọ ya na ndị otu ndị ọkachamara. nke DCW, nke n'aka nke a ga-eweta igwefoto dijitalụ na ọrụ a na-akpọ "ejima".
Inwe symbiosis a di n'etiti ndi ahia, Ọrụ Dijitalụ Dijitalụ, Bentley na Topcon, n'aka nke ha, ga-achọ ibute itinye ego ha na ntinye ego na mmelite nke injinia ihe injinịa. Greg Bentley, onye isi oche nke Bentley Systems enweghị ike idozi ya:
“Mgbe Topcon anyị chọpụtara ohere Mmepe iji rụpụta ọrụ nke isi ego, anyị kwere nkwa n'otu n'otu iji mezue software ha chọrọ. N’ezie, ikike ngwanrọ ọhụrụ anyị na-eme ka o kwe omume iwulite ejima dijitalụ: njikọta dijitalụ convergent, ihe dijitalụ na usoro ọgụgụ dijitalụ. Ihe foduru, site na ịbụ dijitalụ maka owuwu akụrụngwa, bụ na ndị mmadụ na usoro ndị na-ewu ụlọ na-eji teknụzụ arụ ọrụ. Anyị na Topcon ekenyela ọtụtụ ihe anyị kacha mma, ndị ọkachamara nwere ahụmịhe na owuwu na ngwanrọ, ijere ubu, na okpu agha, iji mee ka nkwalite dijitalụ achọrọ. Ihe omumu ihe omuma di omimi dijital a nwere oru na nkwa zuru oke nke ndi ulo oru anyi abuo, na abawanye ike ha di iche iche iji nyere ha aka ime ka ihe ndi ozo di ike.
More si Digital Twins
Echiche Digital Twin sitere na narị afọ gara aga, ọ bụ ezie na enwere ike ịkpọlite ​​ya n'ọnwụ dị ka ihe na-ewu ewu, eziokwu ahụ bụ na ndị isi ụlọ ọrụ nwere mmetụta a na teknụzụ na ahịa na-ebugharị ya ọzọ, na-ekwe nkwa na ọ ga-abụ ihe a na-apụghị ịgbanwe agbanwe. Digital Ejima yiri nnọọ larịị 3 nke BIM ụkpụrụ ma ugbu a ọ na-egosi na ha ga-abụ Gkpụrụ Gemini nke ahu g’enye akara n’okporo uzo.
Na mmelite ProjectWise 365 - nke na-eji Microsoft 365 na teknụzụ dabere na SaaS- ọrụ dabere na weebụ - igwe ojii- yana ojiji nke data BIM, na-enye ohere ọrụ dị ka iTwin ka ọ dị maka ụdị mgbanwe. na ọkwa ọ bụla maka ụdị ụlọ ọrụ niile. N'echiche sara mbara, na ProjectWise 365 ndị sonyere na oru a nwere ike ijikwa ihe ọ bụla metụtara ọrụ ahụ (chekwaa atụmatụ, jikwaa mmegharị ọrụ, ma ọ bụ mgbanwe ọdịnaya).
Ndị ọrụ –professionals- nwere ike ịbanye nyocha nke mmụọwinwin, iji jikọta ọrụ ahụ n'ụzọ zoro ezo, na-agagharị n'etiti echiche 2D na 3D. Ugbu a, ndị ga-eji ngwá ọrụ a maka ọrụ, yana ntinye ha na ProjectWise, ọ ga-ekwe omume ịgbanwe ejima dijitalụ nke ọrụ ahụ, na-eleba ebe na mgbe mgbanwe ndị ahụ mere. Ihe njirimara ndị a niile ga-adị ma emesịa afọ 2019.
“Twmụ ejima dijitalụ nke akụrụngwa na ihe owuwu ihe owuwu na-aga n'ihu na ọkwa ndị a, karịsịa na ọrụ igwe ojii ọhụrụ anyị. Ndị ọrụ ProjectWise, BIM nọmba 1 ngwanrọ ngụkọta ihe na ọmụmụ ihe ARC ọhụrụ, emeela Bentley otu n'ime ndị ọrụ ISV kachasị ukwuu nke Azure. Anyị na-agbasawanye ngwa ọrụ ntanetị anyị na ntanetị ProjectWise 365; mee ka ọrụ ebere igwe ojii dị ebe niile maka nyocha nyocha ma ọrụ aka na ọkwa nke oru ngo; ma na-eme ka iru SYNCHRO dịkwuo ukwuu site na ọrụ igwe ojii. Nnyefe akụrụngwa akụrụngwa bụ isi dabere n'oge, yana oghere. Ihe owuwu dijitalụ nke Bentley 4D na ejikọ ọhụụ na-akwọga ọganihu dijitalụ maka injinị akụrụngwa, taa, n'ụwa niile! »Noah Eckhouse, onye isi osote onye isi oche nke nnyefe ọrụ maka Bentley Systems
Ma ọrụ igwe ojii SYNCHRO Ndị ọrụ Bentley Systems nwere ike ịpụtapụta ụdị iji jikwaa mmezu nke ihe omume, data n'ọhịa ma ọ bụ n'ọfịs, yana nlele nke ọrụ niile, ụdị na ọbụna esemokwu nke na-akwalite njide data ma belata ihe egwu nke ịdakwasị ya. ihe nwude N'ihe niile dị n'elu, njikọta nke eziokwu dị ukwuu na Hololens 2 nke Microsoft agbakwunyere, na-arụpụta echiche 4D nke atụmatụ ọrụ, ya bụ, anya nke 4D nke ejima dijitalụ.
Nweta ndị ọhụrụ
Ezinaụlọ Bentley Systems na-esonye na teknụzụ dịka Global Mobility Simulation Software (CUBE) - Citilabs, nyocha (Streetlytics), yana ihe ndị ọzọ metụtara njikwa nke data geospatial, Orbit GT sitere na onye na-eweta Belgium Orbit Geospatial Technolgies - nke na-enye ngwanrọ 3D mapi, 4D topography, nnakọta data site na drones.
Nweta ndị a bụ akụkụ nke teknụzụ arụkọtara ọgbara ọhụrụ, nke a pụrụ iji meziwanye atụmatụ dijitalụ mepere emepe. Inweta data sitere na obodo site na drones, dabere na 4D - Orbit GT-topography, na-abanye data ahụ na ngwa ndị dị ka Open Roads - Bentley ma na-emepụta simulations na CUBE, nchịkọta nke data akpanye ụzọ dị adị wee nweta ma nso wuo, nke eji ezi uwa kpuchie.
Usoro eziokwu dị na ngwaọrụ ndị a, na-enye ohere ịchọpụta ọkwa na arụmọrụ nke akụrụngwa na akụrụngwa, - nke a bụ ebumnuche nke inweta ndị a. Mgbe enwetachara data nke eziokwu, ya na ọrụ igwe ojii igwe ojii Bentley, ndị ahụ nwere mmasị nwere ike ịnweta data a, na-akwado ejima dijitalụ.
«Obi dị anyị ụtọ ịbụ akụkụ nke Bentley Systems. Ndị ahịa anyị na ndị mmekọ anyị ga-enwe ohere dị mma iji jikọta atụmatụ, atụmatụ na ịrụ ọrụ nke usoro mbufe multimodal. Citilabs, ebumnuche anyị abụwo ikwe ka ndị ahịa anyị nwee ike iji data dabere na ọnọdụ, ụdị omume na mmụta igwe site na ngwaahịa anyị iji ghọta ma buo amụma mmegharị na obodo anyị, mpaghara na mba dị iche iche. na njem a mere atụmatụ iji meziwanye usoro na arụ ọrụ nke usoro ngagharị echi «. Michael Clarke, onye isi oche na onye isi nke Citilabs
Na nkenke, izu na-atọ ụtọ na-echere anyị. Anyị ga-ebipụta akụkọ ọhụrụ na ụbọchị ndị na-esote.
Previous Post«Previous Ntughari uche nke a
Next Post Mwepụta imewe - ntinye aka na BIM dị elu site na Digital TwinsNext »